नेपालकै सानो जिल्ला भक्तपुर । पर्यटकीय दृष्टिले संसारका पर्यटकको ध्यान खिच्न सफल यस जिल्लाको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक महत्व उत्तिकै छ । ‘हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति मध्यपुर थिमी हाम्रो सम्पत्ति’ नारा तय गरेको नगर शिल्पी सहरका रूपमा परिचित छ । यहाँ बन्ने माटाका भाँडाको मौलिक पहिचान छ ।
पछिल्ला दिनमा नगरक्षेत्रमा नयाँ बस्ती बसाल्ने र मनोमानी जग्गा प्लटिङ नगरपालिकाको टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ । यद्यपी, नगरपालिकाले यहाँको मौलिकता मास्न नदिनका लागि यसअघि नै कृषि योग्य क्षेत्र र आवासीय स्थान छुट्याएर कार्यान्वय गरिसकेको मेयर मदनसुन्दरले बताए ।
हाल नगरको जनसङ्ख्या १ लाख पुगेको अनुमान छ । शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकसित हुँदै आईरहेको यस नगरपालिकाको साक्षरता प्रतिशत ९८ प्रतिशत छ । नेवार समुदायको वाहुल्यता रहेको यो सहरमा मनाईने जात्राहरुमा बिस्केट जात्रा, जिब्रो छेडने जात्रा, गाईजात्रा, ईन्द्रजात्रा, खड्ग जात्रा आदि प्रमुख छन् । नगरको सांस्कृतिक,ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको जगेर्ना गर्दै यहाँको समग्र विकासका लागि मेयर सुन्दर कटिबद्ध देखिन्छ । नगरको यिनै विकास निर्माणका एजेण्डामा केन्द्रित भएर अमरवाणी डट कमले नगर प्रमुख मदनसुन्दर (जगलु) श्रेष्ठसँग गरेको वार्ताको सार ।
तपाई नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको एक वर्ष बित्न लाग्यो, यस अवधिमा के कस्ता विकास निर्माणका योजना अघि बढाउनु भयो ?
हामी निर्वाचित भएर आएपछि मध्यपुरमा दिगो र योजनावद्ध विकासको अवधारणालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर अघि बढेका छौं । निर्माण सम्बन्धि कुनैपनि काम उपभोक्ताबाट होस वा ठेक्का पट्टाबाट भएको होस, त्यस कामलाई हामीले डिजाईन, रेखाङ्कन र स्टमेट अनिवार्य गरेर विगतमा हुँदै आएको हचूवा प्रवृत्तिको अन्त्य गरेका छौं । एक आर्थिक बर्षे र बहुबर्षीय कामको बर्गीकरण गरेर अघि बढाईएको छ । यो वर्ष नगरमा ढल निकास, सडक सुधार, सरसफाई र साँस्कृतिक जगेर्नाका कामहरु भईरहेका छन् । नगरका फोहोर उठाएर व्यवस्थित विसर्जनका निम्ति ५ ओटा गाडी थप्ने र फोहोरलाई कम्पोष्ट मलमा परिणत गर्नका लागि जापानी प्रविधि अनुरूप काम भई रहेको छ ।
दिगो फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति जापानको नागोयाको रोटरी क्लब र मध्यपुर रोटरी क्लबबीच सम्झौता गरेर युएस हयबिटाट र नगरपालिकाको समन्वयमा ल्याण्डफिल्ड साईडको विकास गर्न गईरहेका छौं । नगरमा पानीको आपूर्तिलाई बिशेष ध्यान दिएर ऐतिहासिक पोखरी, कुवा र ढुङगेधाराको संरक्षणका लागि एउटा अभियान नै सञ्चालन गरिएको छ र यसलाई अझै तीब्र बनाईने छ । यस बाहेक अहिले नगरको उत्तर दक्षिण चल्ने सडक फराकिलो बनाउने काम भईरहेको छ ।
निर्वाचनका बेला जनता समक्ष गरेका वाचा÷प्रतिबद्धता के कति पूरा गर्नुभयो ?
मैले कामको सुरूवात नै निर्वाचनको बेला जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताबाट थालेको छु । यसमा सुन्दर र समृद्ध मध्यपुर नगर,यहाँको विश्व प्रसिद्ध शिल्पकारिता,धार्मिक र सांस्कृति धरोहरको जगेर्ना,पोखरी ढुङ्गेधाराको संरक्षण र कृषिकमुखी नीति निर्माण र नगरको मौलिकतालाई अक्षुणता दिने विषय मेरो प्राथमिकतामा पर्छन् । यस ऐतिहासिक मध्यपुर ठिमी नगरलाई अझ वढी सुन्दर र समृद्ध बनाउँदै एउटा पौराणिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विश्वलाई नै आकर्षित गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
चुनावी नारा कार्यान्वयन गर्न कत्तिको अप्ठेरो हुँदोे रहेछ ?
हामीले चुनावमा जनता समक्ष गरेका वाचा र घोषणाहरू त्यतिकै विना सोच विचार गरिएका होइनन् । कुन योजना गर्न सकिने ÷नसकिने आकलन गरेरै गरिएका हुन् । सबै वाचा ‘क्याल्कुलेटिब’ रुपमा गरिएको थियो । नपुग्ने र गर्न नसक्ने वाचाहरु गरेका छैनौं हामीले । अहिले विगतको हाम्रा घोषणा पत्र र हाम्रा वाचा अनुरुप नै हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर योजनावद्ध रुपमा नगरको विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाएका छौं । त्यसैले पनि हामीलाई कुनै अप्ठेरो परेको महसुस भएको छैन ।
चालू आर्थिक बर्षमा वडागत बजेटको बाँडफाँट कसरी गर्नुभयो ?
चालू आर्थिक बर्षका लागि प्रत्येक वडालाई १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाट ९ ओटै वडामा बिभिन्न विकास निर्माणका कामहरू थालिनेछन् । नगरको कूल बजेट ७३ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ हो । केन्द्रीय तहबाट आउने अनुदान र परियोजना लागत सरकारले नै विनियोजन गर्छ ।
विकास निर्माणका लागि बजेट अभाव छैन ?
मध्यपुर ठिमी नयाँ नगरपालिका नयाँ होईन, यो २० बर्ष पुरानो नगरपालिका हो । यहाँको ७३ करोड रुपैयाँको बजेटलाई कम होइन । काम गर्दैजाँदा कहिँ कतै ठुला र मेगा प्रोजेक्टका लागि त बजेट कमि भएको महसुुस हुन्छ नै तर यसलाई अभाव भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन । बजेट अभाव वा कमि भयो भन्नु भन्दा पनि पहिले हामीले आफ्नो कार्यक्षमता पनि बढाउन सक्नुपर्छ । विनियोजित बजेटलाई हामीले तोकिएको कामलाई ठिक समयमा दिगोरूपले गरेर देखाएपछि मात्र थप बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता हासिल गर्छौं ।
मध्यपुर नगरपालिकाले आफै अर्थोपार्जन गरेर विकास निर्माणका योजना संचालन गर्नका निम्ति यसका आर्थिक स्रोतहरु चाहिँ कत्तिको छ ?
हाम्रो नगरपालिका पुरानो भएकोले यहाँ आर्थिक स्रोतको कुनै कमी छैन । म त मध्यपर ठिमी नगरपालिका भरी पैसै÷पैसा देख्छु । अहिले नगरका मुस्किलले १० देखि १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र करको दायरामा ल्याउन सकिएको छ । यदि हामीले नगरबासी सबैलाई करको दायरामा ल्याएर ७० प्रतिशत सम्म पुर्याउन सक्ने हो भन यहाँको विकास निर्माणका निम्ति रकमको अभाव हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।
तपाईंहरु मेयर र उपमेयर अलग अलग पार्टीका भएकाले तपाईंका बीचमा यदाकदा विवाद देखिँदै आएको छ । यसले नगरको विकास निर्माणमा कत्तिको बाधा पुर्याएको छ ?
चुनावमा त हामी पार्टीगत रूपले नै चुनिएर आएका हौं । तर चुनाव सकिएपछि पार्टीगत राजनीति पनि सकियो । अब हामी पार्टीका मात्र प्रतिनिधि नभएर सम्पूर्ण जनताका प्रतिनिधि हौं र त्यहि अनुरूप नगरको विकास निर्माणमा जुटेका छौं, हामीबिच त्यस्तो कुनै समस्या छैन । राजनीति र बिचारका कुरा त अब फेरि अर्को चुनावमा गरौंला, अहिले चाहिँ हामी मिलेरै नगरको विकास निर्माण गर्नेछौं ।
प्रदेश नम्बर ३ को राजधानी मध्यपुरकै ठिमीमा रहने चर्चाले व्यापकता पाएको थियो, अब त्यो बिषय हरायो ?
जसले जे भने पनि जे गरे पनि प्रदेश नं ३ को राजधानीका लागि भक्तपुरको ठिमी भन्दा उपयुक्त र पुर्वाधारयुुक्त स्थान अन्य कतै छैन । कसैको क्षणिक राजनैतिक स्वार्थपुर्तिका लागि तत्कालका लागि हेटौंडालाई प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी तोक्ने काम भए पनि अन्ततोगत्वा त्यो बहुसंख्यक जिल्लालाई अपायक स्थान हो भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । प्रदेश सभाका दुई तिहाई भन्दा बढ्तै माननीय सांसदहरु हेटौंडामा राजधानी अपायक पर्यो भनिरहनु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु । त्यसैले प्रदेश सभाको दुईतिहाई बहुमतबाट पूर्वाधारमा धेरै रकम खर्च गर्नु नपर्ने र सबैलाई पायक पर्ने मध्यपुरको ठिमीलाई नै भविष्यमा प्रदेश ३ को राजधानी बनाईन्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।
मध्यपुर ठिमी नगरमा जग्गाको व्यवस्थापन र घरका नक्सा पासका समस्यालाई नगरपालिकाले समयमै सुनुवाई गरिरहेको छैन भन्ने जनताका गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ ?
यस नगरको ल्याण्ड युज म्याप पहिले देखि नै छ । हामीले लो ल्याण्ड फाँटहरुको संरक्षण गरिरहेका छौं । मनोहरा फाँट, बुढाथोकी फाँट, काँडा डोल जस्ता फाँटहरुमा निर्माण कार्यगर्न विगत १७ बर्षबाट रोकिराखेकोमा अहिले पनि हामीले रोकेकै छौं । यी स्थानमा योजनाबद्ध विकास गर्ने अवस्था आएमा मात्र निर्माण स्वीकृति दिने अन्यथा रोकेरै राख्ने नगरको नीति हो । यस बाहेक अनियमित रुपमा स्वीकृति नलिएर जग्गा दलालहरुले प्लानिङ गरेका जग्गाहरुमा पनि नक्सा पास रोक्का गरेका छौं । अब यस्ता जग्गामा पनि नक्सा पास फुकुवा गर्नेतर्फ हामिले छलफल अघि बढाएका छौं । सँधैका लागि रोक्का गर्न संभव नहुने हुँदा के कस्तो दण्ड जरिवाना गरेर फुकुवा गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौं, चाँडै नै फुकुवा हुन्छ ।
प्रकाशित ११ जेठ २0७५ , शुक्रबार | 2018-05-25 02:15:43